साम्राज्ञीको नजरमा उनका ६ को-स्टार – Mero Film
साम्राज्ञीको नजरमा उनका ६ को-स्टार
२०७५ साउन २० गते १५:२५
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पछिल्लो समयकी चर्चित अनि लिडिङ नायिका हुन् साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह । डेब्यु फिल्म बाट नै चर्चा बटुलेकी उनले धेरै फिल्ममा अभिनय नगरेता पनि उनको चर्चा र डिमाण्ड फिल्म क्षेत्रमा निकै छ । पछिल्लो समय फिल्म क्षेत्रमा उनी त्यस्ती नायिका हुन् जसले एक्लै फिल्म धान्न सक्छिन । उनको उपस्थिति नै दर्शकलाई हलसम्म तान्न काफी देखिँदै आएको छ । उनले हालसम्म ड्रिम्स, ए मेरो हजुर २, तिमी सँग, कायरा, इन्टु मिन्टु लन्डनमा गरी पाँच फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छिन् । यद्यपी उनले अभिनय गरेको पछिल्लो फिल्म इन्टु मिन्टु लन्डनमा प्रदर्शनमा आएको छैन ।
हाल उनले अभिनय गरेको फिल्म कायरा नेपाली फिल्महलहरुमा प्रदर्शन भइरहेको छ र दर्शकहरुको उत्साहजनक साथ पाइरहेको छ । पाँच फिल्ममा उनले पाँच नायकहरुसँग काम गरेकी छिन् । फिल्म ड्रिम्समा नायक अनमोल केसी ए मेरो हजुर २ मा नायक सलिन मान बनिया, तिमी सँगमा नायक आकाश श्रेष्ठ र नाजिर हुसेन, कायरामा नायक आर्यन सिग्देल र फिल्म इन्टु मिन्टु लन्डनमा मा नायक धिरज मगरसँग उनले स्क्रिन सेयर गरेकी छिन् ।
सँगै स्क्रिन सेयर गरेका नायकहरुलाई उनले कस्तो मुल्यांकन गरेकी छिन् त ? उनीहरुको राम्रो नराम्रो पक्ष के छ ? बिबिध पक्षमा उनले गरेको मुल्यांकन यस्तो छ :
अनमोल एक फाइन एक्टर हो । राम्रो मान्छे हो अनमोल वाई हार्ट पनि । एकदमै हार्ड वर्किङ छ । सुटिङ सेटमा पनि सबै कुरा राम्रो छ उसको । कोअपरेटिभ छ । मैले उसको बारेमा खसै नराम्रो केही पाएको छैन आज सम्म । उसले सुधार्नु पर्ने केही छ जस्तो लाग्दैन । जस्ट किप गोइङ अनमोल ।
प्रोफेसनल्ली अनमोललाई ५ मा र्याङ्किङ गर्दा ? – ५
पर्सनल्ली अनमोललाई ५ मा र्याङ्किङ गर्दा ? – ३
सलिन मान बनिया
सलिन पनि एकदमै ट्यालेन्ट छ । उसले फिल गर्यो भने एक्टिङ पनि राम्रो गर्न सक्छ । डान्स पनि राम्रो गर्छ । तर उसको नराम्रो बानी भनेको उ रिसायो भने सुटिङ सेट नै छोडेर गइदिन्छ । ए मेरो हजुर २ को सुटिङ सेटमा पनि त्यस्तो गरेको थियो । मुडी छ सलिन । रिसाउन त मा पनि रिसाउँछु तर जब क्यामरा अगाडी हुन्छ तब म क्यामराको रेस्पेक्ट गर्छु रिस लुकाएर भए पनि हाँस्छु । तर सलिनले त्यस्तो गर्न सक्दैन । रिस क्यामरामा देखियो भने पछी फिल्म स्क्रिनमा पनि देखिन्छ अनी अडियन्सले नराम्रो एक्टिङ गरेछ भन्नुहुन्छ उहाँहरुलाई थाहा हुँदैन के भएको थियो भनेर । उसले यो बानी सुधार्नु पर्छ ।
प्रोफेसनल्ली सलिनलाई ५ मा र्याङ्किङ गर्दा ? – २.५
पर्सनल्ली सलिनलाई ५ मा र्याङ्किङ गर्दा ? – १
नाजिर हुसेन पनि फाइन एक्टर हो । तर उ अली बच्चा जस्तो लाग्छ । म्याचुअर्ड हुनु पर्छ । धेरै मान्छेहरुसँग एकदमै चाँडो नजिक हुन्छ । नजिक हुनु राम्रो हो तर नजिक हुँदैमा सबै कुरा सेयर गर्नु हुन्न । उसले सेयर गर्छ धेरै कुरा । ट्रस्ट गरिहाल्छ चाँडै । उसले यो बानी सुधार्नु पर्छ । अरु त खासै केही छैन । उ राम्रो ह्युमन बिइङ हो ।
प्रोफेसनल्ली नाजिरलाई ५ मा र्याङ्किङ गर्दा ? – ५
पर्सनल्ली नाजिरलाई ५ मा र्याङ्किङ गर्दा ? – ४
आकाश सोसियल पर्सन होइन । जुन उसको प्रोफेसनल लाईफका लागी राम्रो होइन । खासै कोहीसँग घुलमिल हुन सक्दैन । त्यो कुरा फिल्म सुटिङ सेटमा देखिन्छ । उसको यो बानिले उसलाई फाईदा गर्दैन अनी गार्हो पनि हुन्छ एक्टिङ गर्न । को स्टारहरुसँगको ओफ स्क्रिन र ओन स्क्रिन केमेस्ट्री राम्रो बनाउनु पर्छ उसले ।
प्रोफेसनल्ली आकाशलाई ५ मा र्याङ्किङ गर्दा ? – २
पर्सनल्ली आकाशलाई ५ मा र्याङ्किङ गर्दा ? – १
आर्यन दाले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नै गर्नु हुन्न । उहाँको त्यो एकदमै नराम्रो बानी हो । काम गर्न थाले पछी सबै बिर्सिनु हुन्छ । कामसँगै आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु पर्छ आर्यन दाले । अहिले सम्म मैले काम गरेका मध्य सबै भन्दा राम्रो एक्टिङ गर्ने भनेको आर्यन दा नै हो । उहाँको अरु त्यस्तो केही छैन । एकदमै राम्रो ब्यक्ती हो आर्यन दा । बोलीचाली, बानी ब्यबहार सबै राम्रो छ उहाँको ।
प्रोफेसनल्ली आर्यनलाई ५ मा र्याङ्किङ गर्दा ? – ५
पर्सनल्ली आर्यनलाई ५ मा र्याङ्किङ गर्दा ? – ४
धिरज पनि अलिकति इमेचुअर्ड छ । अली बच्चै जस्तो छ । अरु सबै राम्रो छ उसको । गूड लुकिङ छ, एक्टिङ राम्रो गर्न सक्छ, बानी व्यवहार पनि राम्रो छ ।
प्रोफेसनल्ली धिरजलाई ५ मा र्याङ्किङ गर्दा ? – ४
पर्सनल्ली धिरजलाई ५ मा र्याङ्किङ गर्दा ? – २